Roorroon haga jirutti Qabsoon hin dhaabbatu! Irbuu dha!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsRoorroon haga jirutti Qabsoon hin dhaabbatu! Irbuu dha!!
Waardiyoota HD ABO fi Itti aanaa HD Dabalatee Maqaa Miseensotaa fi Deegartoota ABOtiin Qeerroon Oromoo hedduun Gulallee irraa Qabamuun Ukkaanfamaniiru.
Akka Kanaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo Maqaan isaanii armaan gaditti Eeraman kutaa Magaalaa Finfinnee, Gullallee bakka Madanaalamii jedhamu tti gaafa Hagayyaa 27 Kibxata darbe ukkaamfamanii achi buteen isaanii hin baramne.
Haaluma kanaan Qeerroon ukkaamfamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifaman kunneen,
1.Leencoo/Anbassuu Aboo Waardiyaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa
2. Callaa Ismaa’il Wardiyyaa Itti Aanaa HD ABO Jaal Araarsoo Biqilaa
3. Jamaal Bishee (Tsaadiq Kaliifaa)
4. Abbuu lammaa
5. Roobeeraa Ayyaanaa
6. Takkaaliny Mardaasaa
7. Abubakar Abdallaa Hasan
8. Abshiruu Kadir
9. Abdii Boggaalee fi
10.Gaaddisaa Tolasaa jedhamu.
Mootummaan Gabroomsaan kun tarkaanfii Ijibaataa Miseensotaa fi Deegartoota ABO irratti fudhatuun kufatii irraa of hin dandamachiisu, daranuu Qabsoo itti finiinsa male.
Waan ta’eef ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf ukkanfaman kanaaf Ummanni Oromoo bal’aan yeroon itti birmatu ammaa fi ammaan dhaamsa yerooti
Faaruu Haaromsa Lammeessoo ODP dhagayuuf jirra. Ummanni amma illee bulchiinsa badaa sanaan dararamaa jira.
“goomolee haqinna Bulchinsa gaarii hamatti jira. Haroomsaa wanni jedhan hin geenye. Waggaa 4 bulchaan nama tokko . Eegii isaa bulchaan godina 3 kan Oromiyaa 3 bulchooti aanaalee godina keenya 4_5 jira. Kun dhaala godhatee jira . Namichi amaala TPL kaan qaba Oromoo sadeen waliin jirtuu hundaa qubaan tuqa. Gabraan yoo aniin ka,ee bulchaa nama booranatti dhufaa jedha
Booranan abdiin borana jaalata jedhan na hadhan jedhan. Gujiin gabraafi booranilleen laga seera gamatti galchaa jedhan anattii dida jedhe.
Jaarolee afaan ibidda gosa tana keessa bitatee Yoo haaroomsi dhufuu jaarrolee ergata Godina keessa wagga hundaa nama inni qarshii geesufitti jira Muudama aanaa kana.dandeettimiti kootaa yeroo kanaan nami uumaata fayaduu hangootti fiduu malee kootaan Maal Qarshii daanga gandoota irraa guuraa bahan hundaa bakka isiin baatee hin garree
Shanee innummaan seena jedhan. Ammallee seelii jedha uumaati hidhaafi qixxatin baduutti jira
Haroomsi aanaa goomolee waan sadii irratti hundsa
Nami naan faarsiin aanaa kana keessa hin jirtuu jedhe . Dhiyoo kana nama Ediin Saldhessa jedhan abo meesha gurgura jedhe halkan sa,ati ja,a makalkiyan mana isaa cabsee niiti rifatee garaachi irraa bu’e Eegii sun ammallee bulii 10 hidhe birri kuma 12 irraa fudhatee
Konkolat saame maqa namattin bitatee qaba.